2011 April | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 2
> အမေ့အေးရိပ် နီလွင်သွေး (ဒဿနိက) ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၁၁ အမြန်ရထားကဘိုးသာအောင်ကုန်းချောင်းတံတားပေါ်အဖြတ်မှာတဝေါဝေါနဲ့ ရင်တလှပ်လှပ်မောလို့အမေ့မှာ မျှော်တော်ဇောနဲ့ မောရှာနေတော့မယ်။ နွေကျောင်းပိတ်ရက် အိမ်ပြန်ချိန်တွေလိုမချိုမြိန်နိုင်သောစိတ်ကူးများအဲဒီအလွမ်းတွေနဲ့ မကြာခဏ ဖျားတယ်။ ဒီနွေဦးကရွက်ကြွေတွေလိုတစစီလွင့်မျောနေခဲ့တယ် အမေရယ် ။ ၉၊...
> မေးချင်ရာမေး၊ ဖြေချင်ရာဖြေ – ၁ လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၀က်ဆိုက်နဲ့ အခြားဝက်ဆိုက်တွေ၊ ကွန်ပြူတာသုံးစွဲမှု နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ကမာရွတ်သားက ကမာရွတ်ဝက်ဆိုက်တခု ထောင်လိုက်တယ်။ (www.kamayut.com )၊...
>Cartoon Win Pe – vitamin
> ကာတွန်း ၀င်းဖေ – ဗီတာမင်ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၁၁ လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၅၀ ခန့်က လူထုသတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သော ကာတွန်းဖြစ်သည်။ http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8494&Itemid=121
>April 22nd 2011 – Q & A with Suu
> “လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေးအဖြေအစီအစဉ်” ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၁ အာရ်အက်ဖ်အေ အစီအစဉ် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းက ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများ အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို ပန်ကြားလွှာရေးသားရာမှာ ပြည်ပရောက် မြန်မာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ...
> အတွေးများ၊ လူများ၊ သမိုင်းစာမျက်နှာများ ၂၃ နှစ် ကမာပုလဲ ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၁၁ (၁) ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးတွင် ပြည်သူတယောက်အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများ...
>After new administration in Rangoon, no more plastic bags in the market
> ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ပြောင်းပြီးနောက် ပလပ်စတစ်အိတ်ပါး ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု ပိတ်ပင် ခင်သန့်ဇင်၊ ရန်ကုန် ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၁ ယခင် သံအမတ်ဟောင်း ဦးလှမြင့်အား ဧပြီလဆန်းက ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း သီတင်းပတ် ၃ ပတ်ကျော်အကြာတွင်...
> စင်္ကာပူ ၂၀၁၁ မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲက ဆရာကြီးအောင်သင်းဟောပြောချက် အသံဖိုင် ထွက် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၁ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ သဇင်မဂ္ဂဇင်းအဖွဲ့က စီစဉ်တဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် စာပေဟောပြောပွဲ...
>Ashin Nanika – This too shall pass away # 2
> ဒါလည်း ပြီးသွားမှာပါ (၂) အရှင်ဉာဏိက မိုးမခ၊ ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၁ “This too shall pass away” ဆိုတဲ့ အမှတ်မထင် ကြားမိတဲ့ သီချင်းလေးကို အခြေခံကာ...
> ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်က မြန်မာ ၁ ထောင် ကျော်၏ ကားမောင်းလိုင်စင်များကို ရုတ်သိမ်း မိုးမခအထောက်တော် ဒင်ဗား ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၁ ယမန်နေ့က ရရှိသော သတင်းအရ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်၊ ဒင်းဗားမြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသူ...
>Kama Pale – It’samad world
> ပွင့်ကျနေသော ရူးသွပ်ကမ္ဘာကြီး ကမာပုလဲ ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၁ ၂၁ ရာစုမှာ ကမ္ဘာကြီး ပွင့်ကျနေတယ် …။ ပွင့်ကျနေတာမှ ဒလဟော … တခုမကျန် … ရူးရူးသွပ်သွပ်...
>Cartoon Win Pe – Mr. Angry
> ကာတွန်း ၀င်းဖေ – စိတ်ကြီးသူဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၁ လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၅၀ ခန့်က လူထုသတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သော ကာတွန်းဖြစ်သည်။ http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8494&Itemid=121
>NLD urged USDP Government to follow justice, law & order
> အင်န်အယ်ဒီပါတီက ကြံ့ဖွံ့အစိုးရသစ်ကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် တိုက်တွန်း မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၁ ယမန်နေ့ ဧပြီ ၂၅ နေ့စွဲနဲ့ အင်န်အယ်ဒီပါတီက ထုတ်ပြန်ရာမှာ ယခုအသစ်တက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်ဟာ...
> ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ အရောင်ပြောင်းပြီ မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၁ အရပ်ဝတ် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရသစ်၏ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်အသစ် တက်လာပြီး သီတင်းပတ် အနည်းငယ်အကြာတွင် နှစ်အတန်ကြာ မပြင်ဆင်ပဲ ထားခဲ့သည့် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမအား ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ကို မြင်တွေ့ရစဉ်၊...
> ဓါတ်ဆီ တရက် ၂ ဂါလံ၊ ၃ရက်တကြိမ်ထုတ် စနစ်ပြန်ပြောင်းပြန်ပြီ မိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန် ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၁ ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီဆိုင်များ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ပြီး ၁၀ လနီးပါးကြာပြီးနောက်...
> ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၁ မိုးမခရေဒီယို အစီအစဉ် အီစတာနေ့ ခရစ်ယာန်တရားနဲ့ ဓမ္မတေး – ဆရာရှိန်းခင်နဲ့ အဖွဲ့ (ခရစ်ယာန်မြန်မာအသင်းတော် ဆစ်ဒနီ) သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ နှစ်သစ်မင်္ဂလာ စုမိန့်ခွန်း နှင့်...
>Than Soe Hlaing – New Governemnt and Regime’s Legacy
> အစိုးရသစ်နဲ့ နအဖရဲ့အမွေ သန်းစိုးလှိုင်၊ ရန်ကုန် ဧပြီ ၂၂၊၂၀၁၁ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ အနိုင်ရထားတဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ကြီးစိုးတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် ရုတ်တရက် ကျမ်းကျိန်ပြီး...
>Cartoon Win Pe – So, What’s Your Price?
> ကာတွန်း ၀င်းဖေ – ဘယ်လောက်လဲဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၁ လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၅၀ ခန့်က လူထုသတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သော ကာတွန်းဖြစ်သည်။ http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8494&Itemid=121
>Letters from Michigan – 65
> မစ်ရှီဂန်က ပေးတဲ့စာ(၆၅)အောင်ဝေးဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၁ ဆရာ ပါရဂူ မိတ်ဆွေကြီးကိုဒေါင်း… ကျန်းကျန်းမာမာမှရှိပါစဗျာ။ ကျနော်တို့ရေးဖော်၊ ကျနော်တို့ ရဲဘော်ရဲဘက်၊ ကျနော်တို့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း၊ အားလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို၊ အဝေးကနေ ကျနော် အမြဲ...
> ကုက္ကလံ မြောက်ကိုလှည့်ခါမှ ရန်ဝင်း (တောင်တံခါး) ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၁ “စည်းသာတဲ့ သောင်မြေ တောင်လေ မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါလို့ ကုက္ကလံ မြောက်ကိုလှည့်ခါမှ ပြန်ခဲ့မယ် ရွှေညာသူရဲ့” လှေထိုးသားတမ်းချင်း မြန်မာ့ရိုးရာ ကုန်တင်လှေကြီးတွေမှာ...